कर्मचारी समायोजन बिधेयक सरकारको बिरोध गर्ने अर्को मुद्धा ? – Jana Prashasan
कर्मचारी समायोजन बिधेयक सरकारको बिरोध गर्ने अर्को मुद्धा ?
संसदीय समितिमा चर्कोे बिरोध भएपनि सरकारले संसदलाई छलेर कर्मचारी समायोजन बिधेयक ल्याउन लागेपछि आलोचना सुरु भएको छ । सरकारको बिरुद्ध अर्को आलोचनाको बुँदा थप भएको बिश्लेषकहरुको भनाई छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ। ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ। संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए। अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिकूल हुने उनले बताएको अन्नपूर्णले लेखेको छ ।